INkosi yesizwe isingenelele kwelomfelandawonye – Ubukhosi
Home/ Izindaba/INkosi yesizwe isingenelele kwelomfelandawonye
INduna uMuzi Dubazane
SELUNGENWE nayiNkosi yesizwe sakwaSithole eDundee udaba lwepulazi lomfelandawonye womphakathi neHhovisi lesiFunda loMnyango Wezolimo okusolwa isisebenzi salo ngokuphuca iqatha emlonyeni amalungu alo mfelandawonye kulandela ukushaya ingwijikhwebu ngomsebenzi wokufuya izinkomo zenyama epulazini lomphakathi.
Amalungu alo mfelandawo iningi lawo okuyintsha usola ukuthi isikhulu eHhovisi Lezolimo sidlulisele lezi zinkomo kwabanye, wona ashiywa ngaphandle ngaphandle kwesizathu.
Emuva kokubikelwa kweNkosi uBhekukwenza Sithole ngalesi simo, ibe isijuba izinduna zayo ukuba zilandelele izikhalo zamalungu alo mfelandawonye emuva kokuba abebexhumana naye eHhovisi lesiFunda eDundee uNkk uThembisile Sithole engasatholakali.
Elandisa elaboHlanga ngokuqala kodaba ongumphathi walo mfelandawonye uNkk uZamanyambose Sithole uthe ipulazi abebezolisebenzisa uma sekufike izinkomo likuWard 5 endaweni ebizwa ngeNew Germany, lona ipulazi libizwa ngeThuthukani MaZulu.
“Ngenxa yokwentula imisebenzi endaweni ngaqhamuka nomqondo wokuthi sihlangane sivule umfelandawonye nenye intsha engasebenzi. Empeleni sasifuna ukuqala ibhizinisi lezinkukhu, kodwa emuva kokucetshiswa ikhansela sabe sesibona ukuthi sifuye izinkomo sisebenzisa umfelandawonye ngoba vele sihlala khona epulazini,” kuchaza uNkk uSithole.
Uthe babe sebexhumana nowesilisa onguMnu uNtuli osebenza eHhovisi lakwaLED eNdumeni yena wabayalela ukuthi baxhumane neHhovisi Lezolimo eDundee nalapho bakhuluma khona noNkk uThembi Sithole wathembisa ukuthi udaba lwabo uzolusukumela.
“Nebala uNkk uSithole wafika ehamba nomlungu onguGordon bezohlola ipulazi ukuthi lingakwazi yini ukusetshenziselwa ukufuya izinkomo. Emuva kokuhlolwa kwalo baneliseka ukuthi kungafuywa futhi nesicelo sethu sokusiselwa izinkomo zamaNguni sizophumelela ngoba lukhona uhlelo olunjalo kuHulumeni.”
Eqhuba uthe ipulazi abebezolisebenzisa elomphakathi wendawo futhi base bekhulumile nawo wavuma ngoba bawubekela ukuthi banezinhloso zokudala amathuba emisebenzi entsheni.
Uthi ngokuhamba kwesikhathi uNkk uSithole (uThembisile) ube esebajikela ebatshela ukuthi ipulazi labo linezinkinga. Ube esesitshela ukuthi izinkomo abezosinika, zonke zenyama, usezidlulisele kuWard 1 ngoba khona kunamapulazi amaningi.
Uthi kumanje yonke into ijamile. Kuthintwa enye yezinduna zeNkosi ezijutshwe ukulandela lolu daba uMnu uMuzi Dubazane ithe kuyaxaka okwenzeka kule ndawo ngoba ngokwazi kwabo abeHhovisi Lezolimo eDundee bafika bazohlola ipulazi lomfelandawonye futhi baneliseka ngalo.
Induna uDubazane ithe amadlelo okuthi lo mfelandawonye ungafuya izinkomo kuleli pulazi akhona kodwa bayasola ukuthi sekukhona nabomphakathi abadlayo ngezinkomo zomlungu esezifakwe kulo.
Uthe kuze kwenzeke konke lokhu nje yingenxa yokunganikwa kwalo mfelandawonye izinkomo ekubeni wakwenza konke okwakudingeka.
“Kuyacaca ukuthi uThembi udedele izinkomo kubangani bakhe njengoba eseshaya ingwijikhwebu manje,” kuchaza uDubazane.
Kuthintwa uNkk uThembisile Sithole eHhovisi Lezolimo eDundee uthe akawazi lo mfelandawo okukhulunywa ngawo ngoba basebenza ezindaweni ezehlukene. Ngifike lapha ngowezi-2015 uma labo bantu bengekho kule Wadi engiyisebenzayo, angeke ngazi ngoba mina ngisebenza nabafuyi njengetechnical advisor,” kusho uNkk uSithole.
Ngesikhathi elaboHlanga limbekela isithombe ngokuthi igama lakhe lingena kanjani odabeni uphendule ngokuthi: “Uzobhala udaba olungelona iqiniso oluzoba nomthelela ongemuhle.” Khona lapho ubuye wajika wathi uyabazi lala okukhulunywa ngabo. Bebehambe beyofaka isicelo.
“Ngokwazi kwami ngabeluleka saya kohlola ipulazi impela salibona,” kuchaza uNkk uSithole. Ekugcineni uthe usenza into engekho emthethweni ukuba aphawule kwabezindaba kungagcono kuthintwe umxhumanisi eHhovisi elikhulu Lezolimo eCedara.
INkosi uSithole ithe akumele kube sengathi abantu benzelwa ufefe uma kumele basizwe emaHhovisi kaHulumeni. Uthe bekungakuhle ukuthi babe khona bonke abathintekayo ngisho noMnu uNtuli osebenza eHhovisi lakwaLED eNdumeni naye uNkk uSithole bazochaza kabanzi ngalolu daba.